Sidee Loo Kordhiyaa Ka Qeybgalka Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Wednesday, April 18, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan dhowaan la wadaagnay macluumaad iyo maqaal faahfaahinaya sideed tallaabo bilow istiraatiijiyaddaada warbaahinta bulshada. In badan oo idinka mid ah ayaa durba bilaabay istiraatiijiyaddaada warbaahinta bulshada laakiin waxaa laga yaabaa inaysan arkin waxqabad badan intii aad fileysay. Qaar ka mid ah taas ayaa laga yaabaa in lagu shaandheeyo algorithms dhexdeeda. Facebook, tusaale ahaan, waxay doorbidi laheyd inaad bixiso si kor loogu qaado waxyaabahaaga halkii aad si toos ah ugu muujin laheyd qofkasta oo raaca astaantaada.
Dhammaantood waxay ku bilowdaan, dabcan, sameynta astaantaada oo mudan inaad raacdo.
Maxay Macaamiisha U Raacaan Noocyada Internetka?
Interest - 26% macaamiisha ayaa leh astaanta ayaa ku habboon danahooda
Bixinta - 25% macaamiisha ayaa leh astaanta ayaa bixisa alaab ama adeegyo tayo sare leh
Personality - 21% macaamiisha ayaa leh astaanta ayaa ku habboon shakhsiyaddooda
Talooyin - 12% macaamiisha ayaa leh astaanta ayaa mudan in lagula taliyo asxaabta iyo qoyska
Bulsho Masuul - 17% macaamiisha ayaa leh astaanta ayaa mas'uul ka ah arrimaha bulshada
Taasi waxay tiri, haddii aadan arkin kaqeybgalka aad fileyso, sawirkan ka socda Branex, 11 Baraha Bulshada Tabta Kordhinta Hawlgelinta ee Dhab ahaantii Shaqeysa, waxay faahfaahin ka bixineysaa xeelado aad isticmaali karto:
Baro bartilmaameedkaaga - Muuji waxa ugu muhiimsan dhagaystayaashaada adoo u kuur galaya waxyaabaha kale ee la wadaagay ee faallooyinka laga bixiyay most ka dibna isticmaal isla xeeladahaas. Waan jeclahay isticmaalka qalabka sida BuzzSumo iyo Xeebaha Tan awgeed. Ugu yaraan, waad dib u eegi kartaa natiijooyinka raadinta iyo golayaasha, sidoo kale.
U habee qoraaladaada barnaamij kasta oo baraha bulshada ah - Ku hagaaji fiidiyahaaga, sawirkaaga, iyo qoraalka barxad kasta. Marwalba waan layaabaa markaan arko qof daabacaya sawir weyn… kaliya si aan u arko iyadoo laga jaray arjiga maxaa yeelay looma fiicneyn in laga daawado barxadda.
Dad yaab leh - Macaamiisha ayaa jecel inay la wadaagaan xaqiiqooyinka, tirakoobka, isbeddellada, cilmi baarista (iyo xusuusta) baraha bulshada, gaar ahaan haddii ay yihiin aragtiyo xiiso leh ama caqabad ku ah.
Abuur waxyaabo leh hawlgal sare - Marka la eego kala doorashada u dhexeeya cusbooneysiinta soo noqnoqda ama cusbooneysiinta cajiibka ah, waxaan door bidi lahaa shaqaalahayga iyo macaamiishaydu inay waqti badan ku qaataan oo ay sameeyaan casriyeyn layaableh oo soo jiidata dareenka dhagaystayaasha.
La shaqee saamileyaasha bulshada - Saameeyayaashu waxay leeyihiin kalsoonida iyo hawlgelinta dhagaystayaashaada. Taabashada iyaga iyada oo loo marayo iskaashi, suuq-geyn la-hawlgala, iyo kafaala-qaadasho ayaa u kaxayn kara dhagaystayaashooda astaantaada.
Bixi baaq-ficil-cad - Haddii qof ogaado boggagaaga ugu dambeeya ee tweet-ka ama cusbooneysiinta, maxaad ka rajeyneysaa inay sameeyaan marka xigta? Ma dejisay rajadaas? Waxaan sii wadaa inaan ka digo iibinta adag ee wararka bulshada dhexdeeda ku saabsan, laakiin waxaan jeclahay inaan ku xanto raad raaca dalab, ama u bixiyo wicitaan ficil ah oo ku saabsan astaanta bulshada.
Raadi waqtiga ugu fiican ee wax lagu dhejiyo - Waad la yaabi kartaa midkan, laakiin had iyo jeer maahan wax ku saabsan markii aad wax daabacayso, ee waxay ku saabsan tahay goorta ay dadweynuhu gujinayaan oo ay wadaagaan inta badan. Hubso inaad kahortagayso qaloocaas. Haddii, galabtii, guji-qiimayaashu ay ka sareeyaan… markaa hubi inaad ku daabacdid duhurkii aagagga waqtiga ee macaamiishaada.
Isticmaal fiidiyowyo toos ah Facebook - Tani waa istiraatiijiyadda kaliya ee aan mushahar-u-ciyaarin (haddana) iyo in Facebook uu sii wado inuu si xawli leh u dhiirrigeliyo. Ka faa'iideyso tan oo si toos ah ugu noolaaw xilliyo kooban waxyaabo aad u wanaagsan oo loogu talagalay dhagaystayaashaada.
Ku biir kooxaha ku habboon - LinkedIn, Facebook, iyo Google+ waxay leeyihiin xoogaa cajaa'ib leh, kooxo firfircoon oo leh dad aad u tiro badan. Daabac macluumaad qiimo leh ama ku bilaw wadahadal weyn kooxahaas si aad isugu aaminto maamul aamin ah.
La wadaag waxyaabo badan - Uma baahnid inaad qorto wax kasta oo aad wadaagto. Tusaale ahaan, xog-ururintan looma qorsheyn mana daabicin aniga - waxaa sameeyay Qeybta. Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha ku jira iyo tilmaamaha ay ka mid yihiin waxay aad ugu habboon yihiin dhagaystayaashayda, marka waan la wadaagayaa! Taasi kama qaadayso awooddayda xagga warshadaha. Dhagaystayaashaydu way ixtiraamaan inaan ogaado oo aan helo waxyaabo qiimo leh sida tan.
Weydii jawaab celin - U wareejinta dhagaystayaasha bulsho waxay u baahan tahay wadahadal. Iyo u wareejinta bulshada u doodista waxay u baahan tahay tiro shaqo adag. Weydiiso dhagaystayaashaada inay ka helaan jawaab celin isla markaana ay uga jawaabaan si dhakhso leh si ay u koraan ka qaybqaadashadaada warbaahinta bulshada!
Waa tan faahfaahinta buuxda oo ka socota Qeybta:
Kuma filna? Waa kuwan wax badan oo ka socda Around.io, 33 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Kordhin Karo Ka Qeybgalkaaga Warbaahinta Bulshada Hadda.
Weydiinta su'aalaha qoraaladaada bulshada waxay dadka ka dhigeysaa inay wax ka sheegaan, kordhinta hawlgelinta qoraaladaada. Weydii su'aalo cayiman, tilmaaman halkii aad uga dhawaaqi lahayd hadal-murtiyeed.
AMAs waxay si weyn uga shaqeeyeen Reddit iyo Twitter. Hadda, waxay aad ugu shaqeeyaan Facebook sidoo kale. Dadku ha ogaado inaad si firfircoon uga jawaabi doontid dhammaan su'aalaha (mowduuc gaar ah) dhowr saacadood.
Markuu macaamilku adeegsado badeecadaada oo uu wax ka qoro (dib u eegis qoraal ah ama sawir ama fiidiyoow), kor u qaad waxyaabahaas taageerayaashaada. Noocyada noocan ah (mawduucyada isticmaale-soo saaray) waxay sababaan ka-qaybgal badan.
Wax kasta oo Daalacanayo waxay leedahay fursad weyn oo ah in la jeclaado, la wadaago ama wax laga faalloodo. Soo ogow waxa soo kordha ee ku habboon taageerayaashaada oo si joogto ah ula wadaag.
Raadi isticmaaleyaasha isticmaalaya hashtags oo aad uga jawaabtid qoraalkooda iyo qoraalladooda: tani waxay kordhineysaa kaqeybgalka boggaaga gaarka ah markay eegaan qoraaladaada.
Sidoo kale, raadi ereyada muhiimka ah la xiriira suuqaaga oo aad la macaamisho dadka isticmaalaya ereyadaas muhiimka ah qoraalladooda.
Had iyo jeer jawaab @mention kasta oo aad ka hesho baraha bulshada - tani waxay dadka u oggolaanaysaa inay ogaadaan inaad danaynayso oo aad dhagaysanayso taas oo iyana kordhinaysa hawlgelinta.
Sax iyo kor u qaadida waxyaabaha dadka kale laakiin jabis yar: markasta calaamadee isha si isha ay u ogaato in lagu xusay. Mawduuc la'aanta xusiddu waxay kasbataa hawlgal kayar (mararka qaarkood midkoodna) mid kabadan mid leh xusid ama labo.
Soo dheji waxa bulshada u fiican oo dadka u sheeg in aad daryeesho qiyamka bulshada. Samafalka, caawimaadda iyo mas'uuliyadda bulshada ayaa wadaya kaqeybgalka.
Bixiso wax bixin ah ama tartan halkaas oo jeclaanta / faallooyinku ay asal ahaan qayb ka tahay bixinta / tartanka. Si otomaatig ah ayuu u kordhiyaa hawlgelinta.
C sax xiriiro badan / ilo badan oo la wadaag dhibcaha (ku calaamadee isha). Xusuusin ballaaran ayaa badiyaa hesha hawl badan.
Isticmaal hashtags soo jeedinaya markii aad hesho kuwa ku xidhi kara suuqaaga / sumaddaada si uun.
Raadi iyo raadi su'aalaha dadku weydiiyaan (khuseeya suuqaaga) meelaha sida Twitter, Quora, Google+ iyo inbadan oo ka jawaab.
Soo bandhig a iibinta waqti xaddidan/ sicir-dhimis ama u sheeg taageerayaasha in kaydka ay ku sii dhacayaan wax soo saar - cabsi-ka-maqnaashaha ayaa kaa caawin doonta inaad ku heshid qasabno badan qoraaladaada.
Markaad tweet ama ka jawaabto qoraal, isticmaal GIFs animated ah. GIFs ahaan asal ahaan waa wax lagu qoslo waxayna dadka ka helaan inay ka helaan / ka faalloodaan (hawlgelin badan).
Weydii jawaab celin (badeecada aad ka shaqeyneyso) iyo fikradaha (alaabooyinka cusub ee dadku rabaan). Waa wax lala yaabo in la ogaado inta taageerayaashaada ahi ay leeyihiin xoogaa jawaab celin ah ama fikrad ah (laakiin ka aamusnow sababtoo ah cidina ma weydiin)
Nooga kaftan galkaaga. Majaajillada mararka qaarkood waxay soo jiidataa waxyaabo badan oo jecel / wadaag ama xitaa faallooyin mararka qaarkood - dhammaantood waxay u horseedi karaan hawlgal badan iyo sidaas darteed, inbadan la gaaro.
Do sahaminta iyo doorashooyinka (adoo adeegsanaya astaamaha codbixinta ee meelaha sida Facebook, Twitter). Xitaa in yar oo ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya ra'yi ururinta ayaa gacan ka geysanaya kordhinta hawlgelintaada oo si fudud ku gaara.
Ka qaybgal khuseeya Sheekooyinka Twitter maxaa yeelay kaqeybgalku caadi ahaan wuu sarreeyaa inta lagu jiro wadahadalka Twitter sababo kala duwan (qaddarka tweets, caan ka ah #hashtag, chat-community iwm)
Ka helay dib u eegista macaamiisha? La wadaag iyaga astaamahaaga bulshada oo calaamadee macaamiisha ku siisay dib u eegis / qiimeyn.
Had iyo jeer gooni u dhig daqiiqado yar oo ka mid ah maalintaada si aad u hesho iyo raac dadka ku habboon ka socda warshadahaaga / suuqaaga. (Waa inaad sidoo kale isticmaashaa qalab adiga kugu habboon)
Tus taageerayaashaada inuu jiro qof bani'aadam ah oo gadaashiisa taabanaya - adoo adeegsanaya emoticons sida aadanaha intiisa kale.
La wadaag waxyaabaha ku habboon inta lagu jiro fasaxyada iyo dhacdooyinka kale ee xilliyada. Mawduucyadan badanaa waxay leeyihiin heer kaqeybqaadasho ka wanaagsan kan kale ee caadiga ah.
Muuji mahadnaq; waad ku mahadsan tahay taageerayaashaada dhacdooyinka muhiimka ah (iyo guud ahaan) taageerayaashaaduna way kula hawl geli doonaan.
Raadi waxa waqtiga ugu fiican ee la dhajiyo (waxay kuxirantahay taageerada bulshada) iyo ku dhaji waqtiyadaas. Waa inaad ku hagaajisaa boostadaada inta ugu badan ee la gaari karo maxaa yeelay taasi waxay saameyn toos ah ku leedahay hawlgelinta inta badan kiisaska.
Haddii aad rabto inaad dadka riixdo, si cad u sheeg taas. Halkan guji si aad wax badan uga ogaato. ” Ku dheji U yeer-ficil qoraalka sifiican uga shaqee dadka.
Weydiiso taageerayaashaada inay "Calaamadi saaxiib”. Dad badan ayaa sameeya taasna waxay kordhisaa oo keliya gaadhista iyo kaqeybgalka boostadaada.
Qoraalada bulshada waxay umuuqdaan inay waxbadan gaarayaan markaad meel ku calaamadi iyaga.
Dhamaanteen waan ognahay qoraalada sawirada hel shaqo badan (labadaba Facebook iyo Twitter). Laakiin ujeedso sawirada ugu tayada fiican marka aad wadaagayso.
Sidoo kale, weydiiso dadka inay dib u qoraan ama si cad u wadaag. Tani waxay raacaysaa sharciga CTA.
Ma heshay ilo waxtar leh? Mise qof ayaa kaa caawiyay meheraddaada? Sii a is-rasaasayn, calaamadee iyaga oo ogeysii taageerayaashaada.
Is-dhaafsi macluumaadkaaga bulshada ee marinnada kale ee bulshada. Ma heshay guddi weyn oo Pinterest ah? Ha ilaawin inaad ku dhiirrigeliso guddigaaga Pinterest barta Facebook ama Twitter (ama meelo kale) marwalba in yar.
Wada shaqeyn iyo la shuraakoobo noocyo kale oo caan ah / ganacsiyada wadaagida qoraallada ama abuurista dalabyo. Wadashaqeyntu waxay kaa caawineysaa inaad gaarto taageerayaal badan (oo ka yimid noocyo kale), waxay kordhisaa kaqeybgalka iyo tirada dadka raacsan ee aad haysato.
Tags: branexbuzzsumohawlgelintaFacebooksida looinfographicInstagramvideo livesemrushhawlgelinta warbaahinta bulshadaTwitter
Fahamka Dardargelinta: Tijaabada Saadaasha ee Boostada Tooska ah